कहाँ छन् सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिका दस्तावेज ? - Netizen Nepal
कहाँ छन् सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिका दस्तावेज ?
in अन्य, ईतिहास, मुख्य समचार, राजनीति
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर। ‘सुन्दा दुःख लाग्छ । तर यो सत्य हो, नेपाल सरकारसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री–सन्धिसहितका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको सक्कल प्रति नै छैन । यस्तो ऐतिहासिक दस्ताबेजको सक्कल नहुनुले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र देखाउँछ,’ यो भनाइ नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का स्वयंको हो । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) ले शनिबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यो भनाइ राखेका हुन् ।
विज्ञहरूले भने सन् १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतको क्युवीस्थित ‘पब्लिक रेकर्ड अफिस’ मा रहेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्दा नेपालले आफ्ना सिमाना प्रस्ट पार्ने आधिकारिक दस्ताबेज बुझाएको थियो । तर देशका संवेदनशील दस्ताबेज संगठित गर्नुको सट्टा परराष्ट्रमन्त्रीले गैरजिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि र त्यही वर्षको डिसेम्बर ११ मा पूरक सन्धि भएको थियो । सन्धिका प्रतिलिपि भनेर कागजपत्र सर्वत्र उपलब्ध भए पनि सक्कल प्रति संरक्षण नहुनु आश्चर्यजनक मानिएको छ । सन्धिको सक्कल प्रति भारतले पनि देखाएको छैन । ‘हस्ताक्षर गरेपछि सन्धिका दुवै पक्षले एक/एक प्रति लिन्छन् । नेपाल र भारतसँग सक्कल हुनुपर्ने हो,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालले मात्र होइन, भारतले पनि देखाएको छैन । त्यसैले हामीले यो विषयमा संवेदनशील भएर खोजबिन गर्नुपर्छ ।’
पूर्व टिस्टा र पश्चिम काँगडासम्म फैलिएको नेपालले सुगौली सन्धिपछि एक तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो । उक्त सन्धिले नेपालको सिमाना पूर्व मेची र पश्चिम कालीभित्र सीमित गरिदिएको थियो । सुगौली सन्धिमा ‘युद्धग्रस्त इलाका नेपालका महाराजाधिराजले इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिबक्सनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै अर्को धारामा नेपालको पूर्वी क्षेत्र ‘मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग गोर्खालीले ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ । यही धारालाई सीमाविद् श्रेष्ठ अस्वाभाविक मान्छन् ।
‘मेरो तर्क के भने मेची र टिस्टालगायतको पूर्वी भूगोलमा त नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध भएकै होइन । त्यता त जमिनको विवादसमेत थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘पश्चिममा लडाइँ भएको हो, त्यसैले सिमाना खुम्चियो । तर पूर्वको विषय कहाँबाट आयो ? सन्धिको सक्कल प्रतिमा त्यो विषय छैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले लुकाइएको हुन सक्छ । सरकारले खोज्नुपर्छ ।’मेचीदेखि टिस्टासम्मको पूर्वी भाग नेपालबाट लिएर ब्रिटिस भारतले एक वर्ष नपुग्दै ट्रिटालिया सन्धि गरेर लाप्चा अर्थात् सिक्किमलाई दियो, जो अहिले भारतमा छ । ‘त्यो सन्धिमा के लेखिएको छ भने यो क्षेत्रमा नेपाल र सिक्किमको बीचमा कुनै पनि विवाद भयो भने ब्रिटिस सरकारले निर्णय गर्ने छ । यस्तो अनौठो कुरा लेखिएको छ, तर सक्कल प्रति दुवैतर्फ छैन । त्यसैले सक्कल प्रति जानाजान लुकाइएको हुन सक्छ, नेपाल सरकारले गम्भीर खोजबिन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले त सन् १९५० को सन्धि पनि जुटाउन सकेको छैन । जब कि सीमाविद् श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा खोजी गर्दा लन्डनको पुस्तकालयमा यो सन्धिको सक्कल भेटेको बताएका छन् । ‘सन् २००८ को अप्रिलमा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लन्डनका क्युवीस्थित ‘पब्लिक रेकर्ड अफिस’ अफिसमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ सन् १९५० को सन्धिको सक्कल पढ्न पाएँ । बुट्टा भरेको काठको कभरमा रातो कपडाले पोको पारेर राखियो,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरी कारणले असर नपुगोस् भनेर हातमा पन्जा लगाएर हेर्न दिए । सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहको हस्ताक्षर छ ।
साथै त्यसमा एउटा लेटरप्याड पनि छ, जसमा अंग्रेजीमा लेखेर राजा त्रिभुवनले अनुमोदन गरेका छन् । बाँगोबाँगो पाराले त्रिभुवन वीरविक्रम शाह भनेर हस्ताक्षर छ ।’ व्यक्तिगत हैसियत भएकाले श्रेष्ठले सो सन्धि ल्याउन पाएनन् । तर, सरकारले पहल गरेमा कम्तीमा ‘डिजिटल कपि’ ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । यो विषय उनले किताबमा लेखेका छन्, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र सरकारी अधिकारीसँगको बैठकमा पनि भनेका छन् । तर, सरकारले लन्डनस्थित सन्धि पनि अध्ययन गरेको छैन ।
अर्का सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल राज्यले खोजी गरे सन्धिहरू भेट्न सकिने बताउँछन् । २०६४ सालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि आफू कोलकाता, दिल्लीका पुस्तकालय मात्र होइन, लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरी पनि पुगेको बताए । ‘लाइब्रेरीमा एउटा रेड र अर्को ग्रिन सेल छ । ग्रिन सेलमा सहजै जान सकिन्छ तर रेड सेलमा जानका लागि रक्षा मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर रेड सेलमा हेर्न लाइब्रेरीका प्रमुखले सुझाव दिएका थिए । तर व्यक्तिगत पहलमा त्यो सम्भव भएन,’ उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरेमा त्यहाँभित्र जान सकिन्छ । विभिन्न सन्धि र नक्सा त्यहाँ भेटिने सम्भावना बलियो छ ।’
२०२९ मा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ पनि क्षति भएको थियो । त्यो आगलागीमा धेरै दस्ताबेजसँगै सन्धिहरू पनि जलेको चर्चा पनि छ । तर, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले भने सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका दस्ताबेज जल्न नपाएको बताए । कान्तिपुर दैनिक
Tags: १९५० को सन्धिसुगौली सन्धि